Nagu Saabsan - Dongying Shengyu Metal Product Co., Ltd.
Dongying Shengyu Metal Product Co., Ltd. waa shirkad dhameystiran oo naqshadeysan oo leh soosaarid iyo isu-uruurinta, ku takhasusay noocyo kaladuwan oo heer sare ah kabka sahaminta iyo qeybaha mashiinka ah, sida qaybaha qalabka dareeraha, qalabka matoorrada iyo qeybaha korantada, qalabka dhejiska, qeybaha gawaarida magaalada, qeybaha mashiinka cuntada, qalabka rakibo korantada. , qalabka dhismaha, qaybaha mashiinnada beeraha iyo noocyo kale oo ka mid ah qaybaha mashiinnada, kuwaas oo inta badan laga sameeyay birta birta ah, birta kuleylka u adkaysta, birta kaarboonka ah, birta aluminiinta hooseysa, alwaaxyada heerkulka sare ah, aluminiumka naxaasta ah iyo aluminiumka aluminiumka.
Shirkaddayadu waxay leedahay qalab sax ah oo dhammeystiran oo ay ka mid yihiin Koontaroolka Kumbuyuutarrada Kumbuyuutarka iyo qalabka wax lagu farsameeyo oo dusha sare ah (duulista, shiidi iwm.) Ee kabka, qalabka kuleylka-dabeysha, qalabka kormeerka miyir-beelka cusbada ka hortagga, qalabka tijaabada cadaadiska, tijaabinta dheelitirka firfircoon ee gaarka ah, CMM, spectrometer, tijaabada tijaabada gaaska, mikroskoolo bir ah, matoor tijaabo ah, daabacaha laser iyo qalabka kale ee tijaabada awooda mashiinka. Waxaan samaynay nidaam adag oo hubin tayo leh waxaanan ku bixin karnaa adeegga geedi socodka oo dhan laga bilaabo baahinta sahaminta saxda ah ee la isugu keenayo alaabooyinka la dhammeeyo, kuwaas oo faallooyin wanaagsan ka helay macaamiisheenna Faransiiska, Jarmalka, USA, Australia, Russia, Japan, New Zealand, Italy, Isbaanish iyo wadamo kale iyo gobolada.
Dabacsanaanta shirkaddu waxay u oggolaaneysaa wax soo saarka qaybta iyo sidoo kale soosaarka taxanaha ah, laga bilaabo dhismaha caaryada ilaa dhammaadka illaa bixinta sahayda qaybaha la isku haysto oo ay ka soo baxaan shuruudaha kaladuwan ee macaamiisha. Qalabka mashiinka sareeya iyo qalabka imtixaanka saxda ah ayaa si buuxda u dammaanad qaadaya tayada sare. ee alaabooyinka tuuraya iyo waxsoosaarka sanadlaha ah ee ka badan 1100 tan.Waxaan rajeyneynaa inaan si hufan ugu gogol xaareyno wadahadalada ganacsiga ee daacad u ah dhammaan martida gudaha iyo shisheeyaha.
Wadada horumarka mustaqbalka, Shengyu wuxuu ku noolaan doonaa rajooyinka wuxuuna ku adkeysan doonaa inuu sameeyo dadaalo uu macaamiisha ugu siinayo alaabo tayo sare leh oo qiimo jaban iyo adeegyo lagu qanco oo si isdaba joog ah isu dhaafa, iskana guuleysta naftiisa iyo dib u dhiskiisa si kor loogu qaado tartannada ganacsiga.
Hal-ku-dhegga shirkadda: "Cilladna kama lihi tayada wax soo saarka, iyo cabashooyinka macaamiisha kama qabaan."
Ujeedada shirkada: “Awood-dhisiddu waxay dhisaysaa sumcadda, daacadnimadana mustaqbalka ayey lumisaa.”